M/weyne Shariif & R/wasaare Sharmaarke oo khadka isgaadhsiinta kaga qayb qaatay xuska sannadguurada 11-aad ee Puntland. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 1, 2009 12:00 b 0
Garowe, Aug 01 – Munaasabad casho sharaf ah isla markaana si heer sare oo loo soo agaasimay oo ay ka wada qayb galeen golayaasha xukuumadda Puntland iyo marti sharaf kale ayaa caawa ka socota xarunta madaxtooyada Puntand ee Garoowe.
Dabbaal daggan imika ka socda xarunta madaxtooyada dowladda Puntland ayaa waxaa qayb ka ah ciyaaro hiddo iyo dhaqan oo jaantus wacan wata iyo qudbado ay jeedinayaan xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha DFKM Soomaaliya Shariif Sh Axmed iyo ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid Sharmaarke oo xidhiidhka telefoonka kaga qayb qaatay munaasabaddan caawa ayaa hambalyo guud u diray umadda Soomaaliyeed, taasoo ku beegan nabad iyo maamul ku negaashaha degaannada xukuumadda Puntland oo ah geyi Soomaaliyeed oo ka samatobaxay qalalaasihii soo taagnaa mudada rubuc qarniga ku dhow. Labada masuul waxa ay si isku mid ah ugu rajeeyeen shacabka reer Puntland in ay sannadkan kiisa kale ku gaadhaan bashbash, badhaadhe iyo horumar.
Sidoo kale waxaa isgaadhsiinta telefoonka kaga qayb qaatay xildhibaanno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo jooga magaalada Addis-ababa kuwaas oo uu ka mid yahay Md Ismaaciil Hurre Buubaa.
Damaashaadka, farxadda, iyo qudbadaha is hogotusaalaynta ah, kaddib waxaa lagu wadaa in ay munaasabaddan caawa ay soo afmeerto qudbadda madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole oo la wada sugayo.